That's so good, right?: October 2016
အဝေးပြေးကားလမ်းမနဲ့ဝေးရာ မြို့အစွန်တစ်နေရာရဲ့ ဂိုထောင်ပျက်တစ်လုံးမှာ အခုနှစ် Halloween အချိန်သမယလေးကိုဖြတ်သန်း နေခဲ့ပါတယ်။ အစဉ်အလိုက်ပုံစံမကျတဲ့ တိမ်တိုက်တွေကြားဖြတ်သန်းကာ ကောင်ကင်ပေါ်မှထိုးကျနေသော အလင်းတန်းများဟာ ဂိုထောင်အမိုးပေါက်တွေကတစ်ဆင့် ထိုးကျနေပုံကိုက သည်နေရာပါဆိုတာကိုညွှန်ပြနေသလိုပါပဲ။
ဂီတသံတွေဟာ လျှပ်စီးလက်သလို မြန်ဆန်သော တီးလုံးသံတွေ၊ခပ်ပြင်းပြင်း ဘေ့စ်သံတွေနဲ့ ဂိုထောင်ကြမ်းပြင်ကိုတောင် တုန်ခါနေစေသလိုတောင်ဖြစ်နေပါတယ်။
တကယ့်အစစ်တစ်ယောက်ယောက်ကို ခွဲခြားကြည့်ဖို့လွယ်ကူပါတယ် သိနိုင်တယ်ဆိုပါတော့။ ဆလိုက်မီးတွေ မီးရောင်အချို့ဖျက်ကနဲ လက်သွားလင်းသွားချိန်ဝယ် သူတို့မျက်ဝန်းတွေဟာ ငွေရောင် သို့မဟုတ် ရွှေရောင်တောက်နေကြသလို စကားပြောတိုင်း ပြုံးပြလိုက်တဲ့ အချိန်တွေဆိုရင် ချွန်ထက်သောသွားစွယ်တွေကမဖုံးမဖိနိုင်ပေါ်လာတတ်ကြတယ်။ သူတို့အသားအရေဟာ ခြွင်းချက်မရှိ အပြစ် အနာအဆာမဲ့နေတတ်ကြသလို သူတို့ရပ်တည်နေထိုင်ပုံတွေက တော်ဝင်ဆန်တယ်လို့ပြောရမယ်။ အခြားသော ပါတီများ နဲ့ အခြား ကလပ်တွေမှာ တွေ့ခဲ့ဖူးသော gay တစ်ယောက် နှစ်ယောက်လောက်ဟာ vampire အဖြစ်မပြောင်းလဲခင်ကတည်းက စတိုင်လ်ကျ လိုက်တာလို့ ကျွန်တော်သတိထားမိခဲ့ပြီးသားပါပဲ။ အခုသူတို့ဒီပါတီမှာကောရှိလား ရှာကြည့်ရမယ် ကျွန်တော်လည်း သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်လို့လေ။ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင် သူ့သားကောင်ရှိရာ အစာရှိရာကို အနီးကပ်စူးစမ်းတဲ့ဟန်နဲ့ကျွန်တော့်မှာ လိုက်ကြည့်နေရတယ်။ လူတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက် စူးစမ်းလိုက်တိုင်း စူးရှတောက်ပသော မျက်ဝန်းတစ်စုံက ကျွန်တော့်ကို ထပ်ချပ် မကွာကြည့်နေသလားလို့။ အေးစက်စူးရှလိုက်တာများ ကျောရိုးထဲကစိမ့်ပြီး အခုပဲ လည်တိုင်မှာ အကိုက်ခံရတော့မယ့်အတိုင်း ခံစားရပါ တယ်။
ထိုင်ဖို့ခင်းကျင်းထားတဲ့ သားရေထိုင်ခုံတွေ ရှန်ပိန်ပုလင်းတွေ ခွက်တွေ ပြီးတော့ စားမြိန်စဖွယ် အစားအသောက်တွေကို platinum ပန်းကန်ပြားတွေနဲ့ တည်ခင်းထားပါတယ်။
အိုး….ပတ်ဝန်းကျင်က လေထု စိုစွတ်ထိုင်းမှိုင်းလာသလို အလင်းရောင်တွေကလည်း သိပ်မလင်းတော့ဘဲ ဟိုသည်ကွက်ကြားလှည့်ပတ်ကစားနေပါတယ်။ အလင်းသိပ်မများတော့ နံရံအချို့မှာအလှဆင်ထားတဲ့ ကြေးမုံပြင် တွေကနေ အလင်းပြန်တာသိပ်မရှိတော့ဘူး။ သွေးစုပ်ဖုပ်ကောင်တွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေဟာ ကြေးမုံပြင်မှာ ပုံရိပ်မထင်ဘူးဗျ။ ကိုယ်တွေ့နေကျ လူတွေ ရင်းနီးပြီးသားလူတွေထဲက လူအချို့ဟာ သွေးစုပ်ဖုပ်ကောင်ဖြစ်နေကြမှန်း အရက်မူးနေသောက်စားပျော်မြူးနေသူတွေမှာ သတိမထားမိကြဘူးထင်တယ်။ သားကောင်ဖြစ်ကြဖို့ဆိုတာ သတိမူမိပါရဲ့လား။
‘ငါတို့လမ်းခွဲပြီးဟိုသည်ကြည့်ရအောင်ကွာ၊ ထူးထူးခြားခြားဘာရှိလည်းစူးစမ်းခဲ့နော်၊ လူချင်းပြန်စုံဖို့ခက်ရင် ငါပြောထားတဲ့ ကားရပ်ထား တဲ့နေရာမှာပဲပြန်ဆုံကြမယ်၊ ဒီပါတီပွဲကိုဘယ်သူဦးဆောင်လုပ်လဲ သိချင်လို့ကွာ..နော်’ ကျွန်တော် ပိုင်ပိုင့်ကို ဂီတသံတွေကြားမှာ သူကြား အောင် အော်ပြီးပြောရတယ်။
ဟိုသည်စူးစမ်းရင်းမှ တစ်ယောက်ယောက်များ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေသလားလို့ခံစားရတာကြောင့် မသိစိတ်ခေါ်ဆောင်ရာဘက် လှည့် ကြည့်လိုက်တာမှ ဥက္ကာရဲ့ တည်ငြိမ်အေးစက်လွန်းတဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ ပြောင်းလဲခြင်း ခေါက်ရိုးကျိုးခြင်းမရှိတဲ့ မူလပထမ မျက်နှာပိုင်ရှင်ပါပဲ။ သူ့မျက်ဝန်းများကလည်း စိန်ပွင့်များအတိုင်း ဆလိုက်မီးများကြားမှာလက်ကနဲ။ စင်မြင့်သဘောလုပ်ထားတဲ့ သီးသန့် စားသောက်ဝိုင်းတွေဘက်ရှိ သတ္ထုထိုင်ခုံတစ်ခုမှာ သူထိုင်နေတာပါ။ အဲ့နေရာကိုကြည့်မြင်ရတာ ဂိုထောင်အဟောင်းထဲမှာလုပ်နေတဲ့ပွဲ လို့မထင်ရအောင် အသွင်ပြောင်းထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့နာမည်ကျော် လေးကိုင်းသဏ္ဌာန်နှုတ်ခမ်းအစုံက လှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်ကြိုဆိုနေသ ယောင် ပြုံးပြပါရဲ့။ လှစ်ခနဲ ပေါ်သွားတဲ့ သွားစွယ်ချွန်ချွန်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ချစ်သူရည်းစားဖြစ်စဉ်တုန်းကထက် ပိုမိုချွန်မြနေသလား။ ကျွန်တော်သူ့စီလှမ်းလာခဲ့ဖို့ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ရုတ်တရက်သူပျောက်သွားပါတယ်။
စင်မြင့်လေးရဲ့ထောင့်ချိုးအကွယ်လေးမှာ လှေကားလေးတစ်ခုရှိပြီး အပေါ်ထပ်ခိုးအခန်းတွေစီတက်သွားဖို့စွဲဆောင်နေပါတယ်။ တစ်လှမ်းခြင်း တစ်ထစ်ခြင်းတက်သွားလို့အပေါ်လည်းရောက်ရော VIP lounge ပုံစံခင်းကျင်းပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တစ်ဒါဇင်လောက်ရှိတဲ့ vampire တွေဟာ ပုံစံမတူအ၀တ်မဲ့သဏ္ဌာန်အဆင့်ဆင့်နဲ့တွေ့ရပါတယ်။ အ၀တ်အစားတွေကင်းမဲ့သွားအောင် နပန်းလုံးထားလို့မောပန်းနေတဲ့ဟန်ဖြင့် ငနဲသုံးပွေဟာ ဆိုဖာပေါ်မှာ ၀စ်လစ်စလစ် ခပ်လျော့လျော့လှဲလျောင်းနေကြပါရဲ့။ ခပ်ချောချော ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကတော့ သူတို့လည်တိုင်နဲ့ လက်ကောက်ဝတ်တွေကို သူတို့ရဲ့ vampire သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အသင့်ပြင် ပေးနေကြတယ်။ ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲဆိုရင် သူတို့လည်တိုင်တွေ သွေးကြောဆုံတဲ့နေရာတွေကို လက်တွေနဲ့ပွတ်သပ် စူးစမ်းနေတဲ့ ဆာလောင်နေသော လူအချို့ကိုတွေ့ရတာကြောင့်ပါဗျာ။
ကောင်ငယ်လေးထဲက တစ်ယောက်ကတော့ သွေးကြောဆုံတစ်နေရာက သွေးကိုအားရပါရစုပ်မျိုနေတာများ သူ့နားထင်ကသွေးကြော ကြီးတောင်မှ လှုပ်နေသလားထင်ရပါတယ်။
‘ဘယ်လောက်တောင် တက်မက်စရာကောင်းလိုက်သလဲ’ ဥက္ကာရဲ့စကားသံက ဟိုးအဝေးကြီးကလာသလိုခံစားရပြီး သူ့အသက်ရှူငွေ့ ဟာ ကျွန်တော့်လည်တိုင်မွှေးညှင်းတွေကို အသည်းယားစေရော။ လေးကိုင်းသဏ္ဌာန် သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာ ကျွန်တော့်လည်တိုင်အနှံ့ ကခုန်နေကြတယ်။ ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ အပွေ့အဖက် အနမ်းအရှိုက်တွေကို ဘယ်လိုမှမငြင်းနိုင်သလို ရုန်းကန်ဖို့လည်းမစွမ်းတော့သလား ဒူးတွေ တောင် တဆတ်ဆတ်ခါကုန်ရပါရဲ့။ ‘ငါတို့အုပ်စုကိုမင်းလိုက်နေတာက ငါတို့အုပ်စုဝင်ဖြစ်ချင်ခဲ့လို့ပေါ့ ဟုတ်လား။ မင်းခြေပုန်းခုတ်နေတဲ့ ကိစ္စ မင်းဖျက်လိုက်တော့မလို့ပေါ့လေ။ ငါအခုသိပြီ….မင်းလိုချင်တာ ဖြစ်ချင်နေတာကို ငါလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ငါတို့အတူတူ ထာဝရရှိနိုင် နေနိုင်ကြမှာပါ’
ကျွန်တော် တံတွေးများကို ခက်ခက်ခဲခဲမျိုချရပါပြီ။ အာ….ဥက္ကာရဲ့သွားအစွယ်များဟာ ကျွန်တော့်လည်တိုင်တလျောက်ခြစ်ပြုနေတာက တကယ့်ကို ကြက်သီးထလောက်အောင်ရင်ခုန်စေပါတယ်။ ပိုင်ပိုင်တစ်ယောက် ပြတင်းပေါက်ကနေ တစ်ဆင့် မျက်လုံးများဝိုင်းစက်နေ အောင်ပြူးကျယ်ပြီး အထိတ်တလန့် အပေါ်ထပ်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ကြည့်နေတာ ကျွန်တော်မြင်တော့မြင်လိုက်ရသေးသလိုပဲ။
ဥက္ကာတစ်ယောက် မာတောင့်စပြုလာတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားကိုဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုကစားနေဆဲဖြစ်သလို ကျွန်တော့်လည်တိုင်ကို လည်း သူ့နှုတ်ခမ်းသားအစုံနဲ့ တပ်မက်စွာအနမ်းပေးနေခဲ့ပါတယ်။ ဟိုးအရင်က အချိန်များစွာ ဖြုန်းတီးခဲ့တဲ့ အိပ်ရာထဲက အဖြစ်အပျက် များစွာဟာ အာရုံထဲမှာ အခုပဲဖြစ်ပျက်နေရသလိုမျိုးထင်မြင်ခံစားရလာတာက ဥက္ကာတစ်ယောက် သူ့သွားစွယ်ချွန်တွေကို ကျွန်တော့် လည်တိုင်ထဲ နစ်မြုပ်ခွင့်အသာတကြည်ပေးနေမိသလိုပဲ။ အို….မိန့်မူးသာယာဖွယ် အနမ်းတွေ…အမြင့်ဆုံးခံစားချက်တွေစီကို ခေါ်ဆောင် သွားတတ်တဲ့ ဥက္ကာရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ခုတင်စောင်းမှာ ဧည့်ခန်းကကြမ်းပြင်ထက်မှာ ရေချိုးခန်းထဲက ရေပန်းအောက်မှာ …. အာ….ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ပါးပြင်ပေါ်မှာ တင်သားဆိုင်တွေပေါ်မှာ ဖွေးကနဲ ဖွေးကနဲ သုက်ရည်တွေ စိုရွှဲသွားကြတာတွေက… ကျွတ်ကနဲ ညည်းတွားမိရတဲ့အထိ ပြန်ခံစားရပါတယ်။ နေခြည်နွေးနွေးရဲ့အောက်မှာ အတူယှဉ်တွဲပျော်ရွှင်ခဲ့ပုံတွေ….တစ်ယောက်ရင်ခွင် ထဲ တစ်ယောက် နားခိုမှေးစက်ခဲ့တာလေးတွေ….ရင်ခုန်သံစည်းချက်နဲ့အညီအိပ်ပျော်သွားခဲ့တာတွေကိုအခုလား အရင်ကလားေ၀၀ါးမိ သလိုဖြစ်နေရပါတယ်။ ဥက္ကာနဲ့ ကျွန်တော်လိင်ဆက်ဆံဖြစ်တိုင်း အသံတိုးတိုးတိတ်တိတ်ဆိုတာမရှိခဲ့စဖူး ချွေးတွေစိုရွှဲ ခြေမတွေ ကုတ်ကွေးမိတဲ့အထိ အိပ်ရာခင်းတွေ တွန့်ကြေကုန်တဲ့အထိ အသံကျယ်ကျယ်ထွက်ခဲ့ကြတာပါ။
အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာပဲ မီးထိတ်လန့်မှု ဘဲလ်တီးသံနဲ့အတူ ခရာမှုတ်သံအချို့ပေါ်ထွက်လာသလို အလိုအလျောက်ရေဖြန်းစနစ်က ပွင့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ခဏနေကသာယာနေသောအချိန်က ကောက်ပင်တွေကိုရိတ်သိမ်းလိုက်သလို ထိတ်ထိတ်ပျာပျာပြောင်းလဲ ကုန်ပါပြီ။ အပေါ်ထပ်ကရှိနေသော သူတွေအကုန် ခြေဦးတည့်ရာထွက်ပြေးခြင်းအခြေအနေတစ်ခုစီပြောင်းလဲကုန်ပါတယ်။
Vampire တွေအတွက် အထိတ်တလန့်ကြောက်ရွံ့တာထက်ပိုသော မချိမဆံ့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်ကြပါပြီ။ ဥက္ကာနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း တွေအကုန်လုံး အသားကုန်အော်ဟစ်ကြပြီး လောင်ကျွမ်းနေသော သူတို့မျက်ဝန်းတွေ သူတို့အရေပြားတွေကိုပွတ်သပ်လိုက်ကြတာ အတုံးအတစ်အဖြစ် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပြုတ်ကျကုန်ပါတယ်။
ပိုင်ပိုင် အခန်းထဲဝင်လာချိန်မှာတော့ vampire တွေဟာ တငွေ့ငွေ့လောင်ကျွမ်းနေသော အ၀တ်ပုံများအသွင်ဖြစ်နေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်နဲ့ ပိုင်ပိုင်တို့နှစ်ယောက် အပေါ်ကအခန်းအနှံ့ရော ကပွဲကြမ်းပြင်ပေါ်က vampire များသွေးအိုင်ထဲမှာလူးလွန့်နေပြီး အမြှုပ်ပုံစံ ပြောင်းလဲပျောက်ကွယ်နေကြတာကိုရော ခဏတော့ ငြိမ်ဆိတ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေမိကြတယ်။
(ကျနော်စာမရေးဖြစ်တာကြာပါပြီ….အခုဒီနေ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဟောင်းတွေပြန်မွှေရင်း ဟိုးအရင်ကရေးခဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကို သူငယ်ချင်းတို့အပျင်းပြေဖတ်ဖို့ဝေမျှလိုက်ပါတယ်)
Posted by Alex Aung at 11:02 AM No comments:
တစ်လှမ်းချင်းလှမ်းတက်လာရသောခြေလှမ်းများ၏အဓိပ္ပါယ်မဲ့မှုကိုသတိထားမိချိန်သည် သော့ခတ်ထားသောတံခါးကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ရချိန်တွင်ဖြစ်သည်။မိုးရေတွေစိုရွှဲနေသောတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကြိုဆိုနေမည့်အရာသည် တင်းတင်းစေ့ထားသော သော့ခလောက်တစ်ခုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးထင်သည်။
ရေတွေစိုရွှဲနေတာပဲ အထဲမြန်မြန်ဝင်စမ်း ဟုဆူပူငေါက်ငမ်းမည့်သူတစ်ယောက်သို့မဟုတ် နွေးထွေးသောအပြုံးတစ်ခုဖြင့်ကြိုဆိုလျက် ရေသုတ်ပေးကာ ကော်ဖီတစ်ခွက်ယူလာပေးမည့်သူတစ်ယောက်ကိုပြင်းပြင်းပြပြတောင့်တမိသည့်အခါ..ကို..ကမာနသိပ်ကြီးတာပဲဟု မှတ်ချက်ချဖူးသူတစ်ယောက်၏အသံကိုကြားယောင်လာသည်။ အပြုံးကိုမြင်ယောင်သည်ဖြစ်စေ မျက်နှာလေးကိုပြန်တွေးမိသည်ဖြစ်စေ ထိုမာနကြီးစွာတင်းတင်းစေ့ထားသောနူတ်ခမ်းများတစ်ဆတ်ဆတ်လှုပ်ခါကြေကွဲလာတတ်တဲ့ဝေဒနာကိုမင်းကိုယ်ချင်းစာနိုင်မည်လား။
အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်ကာစ လူငယ်တစ်ယောက်အဖို့ ညကိုးနာရီဟူသောအချိန်သည် သူငယ်ချင်းများနှင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် သို့မဟုတ်ချစ်သူလက်ကိုဆွဲ၍သူမ၏အိမ်အပြန်လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်ကတော့ အားလုံးနှင့်ဆန့်ကျင်စွာအိပ်ယာပေါ်တွင်ပုံချထားသောအ၀တ်စတစ်စလိုလဲလျောင်းလျက်ရှိ၏။
ပြူတင်းတံခါးများကိုမပိတ်ပဲအိပ်ပျော်သွားသောကြောင့် မျက်နှာကိုလာရောက်ထိမှန်သောမိုးစက်များကြောင့်လန့်နိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။စောင်နှင့်ကင်းကွာနေသောကြောင့် ဘောင်းဘီတိုဝတ်ထားသောခြေထောက်များသည်အေးစက်ထုံကျင်နေသည်။ ညနေပြန်ရောက်ကတည်းက ဘာမှမစားထားသဖြင့် ၀မ်းထဲမှာ ပူလောင်နာကျင်နေသော်လည်းအိပ်ယာထဲမှလဲမထချင် စောင်ကိုလဲထယူချင်စိတ်မရှိပါ..။
စောင်လာခြုံပေးမည်လားဟုတွေးမိသော်လည်း ပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်လာသောလေပြင်းတွင်အတွေးတို့လွင့်ပြယ်သွားသည်။ ကို..က ကလေးဆန်လိုက်တာ ဟု သူပြောလျင်ကျွန်တော်ခံနိုင်ရည်ရှိမည်မထင်ပါ။ တစ်ခြားမည်သူမဆို၏မှတ်ချက်ကိုအရေးမစိုက်ဂရုမထားတတ်သောကျွန်တော်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ဟူသောအရာကိုဘယ်တုန်းကမှထည့်မတွက်တတ်သူဖြစ်သည်။
လက်ကလေးကိုကိုင်ဖို့ခွင့်တောင်းလျင်ပင် လူတွေနဲ့ဟူသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပယ်ချတတ်သော သူ့ကိုချစ်မိသွားခြင်းသည် မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုမှားယွင်းမှုကိုမေ့ပျောက်ဖို့ကြိုးစားလျက် သူ့ကိုတစ်သက်စာလက်တွဲယုံကြည်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မိခြင်းကတော့ မိုက်မဲမှုတစ်ခုဖြစ်သွားသည်။သွားစမ်းပါ..။
နံရံတွင်ကပ်ထားသောနာရီ က ကိုးနာရီခွဲကိုညွှန်ပြနေသောကြောင့်စိတ်နည်းနည်းညစ်သွားသည်။
သည်အချိန်သည်တိုက်ခန်းအောက်ရှိကျုရှင်မှကိုးတန်းဆယ်တန်းကောင်မလေးတွေအတန်းဆင်းသောအချိန်ဖြစ်သည်။လူကိုမြင်လျင် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကာ မကြားတကြားနောက်ပြောင်ကြခြင်းသည်..
ပထမတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တွင်ရင်ခုန်စရာလိုလိုပျော်စရာလိုလိုဖြစ်သော်လည်း ကြာတော့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာသည်။တစ်ခါကတော့ စိတ်ပေါက်ပေါက်ဖြင့် ဒါလေးတွေထဲကတစ်ယောက်လောက်ပဲဆွဲစားရင်ကောင်းမယ်ဟု သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောမိတော့ သူငယ်ချင်းက ဂဏန်းသုံးလုံးကိုရွတ်ပြသည်။ အရွယ်မရောက်သေးသူကိုခိုးယူပေါင်းသင်းသောပြစ်မှု၏ပုဒ်မဖြစ်နိုင်သည်။
မသွားတော့ပါဘူးလေ ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်သိမ့်လျက်အဆင်သင့်ရှိနေသော ခေါက်ဆွဲခြောက်တစ်ထုပ်တစ်လေကိုသာပြုတ်စားရန်ပြင်လိုက်ရသည်။ ရေနွေးအိုးကိုတည်ထားဆဲမှာ မိုးစက်များအဆက်မပြတ်တိုးဝင်နေသောပြူတင်းပေါက်များကိုလိုက်ပိတ်ပစ်လိုက်သည်။ အအေးဒဏ်ကြောင့် ထုံကျင်နေသောခြေထောက်များကိုအချင်းချင်းပွတ်သပ်ကာအချမ်းဖြေရင်းတွေ့ရာထိုင်ခုံတစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်ချလိုက်ရင်း ဘောင်းဘီရှည်တစ်ထည်ယူဝတ်ဖို့ပျင်းရိနေသော ကျွန်တော်သည် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ နှင့် ငွေကြေးကို မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသိုင်းအ၀ိုင်းသို့ဝင်မဆန့်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည်သဘာဝကျပါသည်။ တကယ်ချစ်ရင်ကြိုးစားလေ ဟုပြောသော နုတ်ခမ်းများကိုတစ်ခါတစ်လေတော့မုန်းတီးစိတ်ဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ဖူးသည်။
ပါးလျားနီးမြန်းသောနူတ်ခမ်းများကိုသာလှပသည်ဟုတပ်မက်ခံစားတတ်သောကျွန်တော်သည်အနည်းငယ်ထူအမ်းကာ ပန်းသွေးရောင်နည်းပါးသော သူ့နူတ်ခမ်းများကိုမြတ်နိုးစိတ်သက်သက်ဖြင့်နမ်းခဲ့ဖူးသည်။
တစ်ခါတစ်လေတော့ သူ့လက်ဖ၀ါးလေးကိုဆုပ်ကိုင်လျက် ငါ့ကိုထားမသွားပါနဲ့နော် ဟုကျွန်တော်တောင်းပန်ခဲ့ဖူးပါသည်..။
“ ကို့ ကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ ” တဲ့..။
သူပြောခဲ့သောအပြစ်တင်စကားများစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုစဉ်ကတော့ ကျွန်တော်ရယ်မောခဲ့သည်။နားမလည်နိုင်ရင်နားမလည်နဲ့ပေါ့။ကျွန်တော်သည် ဘာသာစကားတစ်ခုမဟုတ် ပညာရပ်တစ်ခုမဟုတ်။ကျွန်တော်ကို နားလည်လို့လဲ ဘာအကျိုးမှမရှိ..။ရင်ထဲမှသာပြောဖြစ်သောစကားများဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သောပတ်ဝန်းကျင်သည် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများထက် နှလုံးသား၏လိုအပ်ချက်ကိုဦးစားပေးတန်ဖိုးထားသောဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်၏မေမေသည် ငွေကြေးဥစ္စာအတွက်သူမ၏ခင်ပွန်းကိုလည်းကောင်း သားကိုလည်းကောင်းအဝေးတစ်နေရာကိုစေလွှတ်ကာ ငွေရှာခိုင်းဖို့စိတ်မ၀င်စားသူဖြစ်သည်။ထားပါတော့လေ။ငွေကြေးမှလွဲ၍ဘာကိုမှမမြင်တတ်သူများသည်ကျွန်တော်အစက်ဆုပ်ဆုံးလူအမျိူးအစားများဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်ကိုနားမလည်နိုင်ခြင်းအတွက်သူ့အားအပြစ်မဆိုပါ။ကျွန်တော့်ကိုဘယ်သူမှနားလည်ရန်မလိုပါ။ကျွန်တော့်ကိုနားလည်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုလာသောလူများကို ကျွန်တော်အားနာသဖြင့်ပြုံးပြကာတုံ့ပြန်ခဲ့ဖူးသည်။ သူတို့အကြီးအကျယ်လိမ်ညာနေခြင်းသာဖြစ်နိုင်သည်။
စိတ်ထဲတွင်မွန်းကျပ်ကာထွက်ပေါက်မဲ့လာသည့်အခါနံရံကိုလက်သီးနှင့်ထိုးကာ စိတ်ဖြေတတ်သူဖြစ်သည်။သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောသည့်အခါ မိန်းမများအကြောင်းထက်ခေတ်ပေါ်အ၀တ်အစားများထက် ရုပ်ရှင်အကြောင်း ကဗျာအကြောင်း နှင့် မူးယစ်သေစာများအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ဂျင်းဘောင်းဘီကို ချက်အောက် တစ်မိုက်ခန့်အကွာမှာလျော့တိလျော့ရဲဝတ်ဆင်တတ်သူဖြစ်သည်။ကြည့်မရသော ငနဲများကိုပုခုံးချင်းဝင်တိုက်ပြီး `ဟယောင် -ီးကြည့်တာလား´ ဟုရန်စသောအလုပ်များကိုအသက်နှစ်ဆယ်မကျော်ခင်ကလုပ်ခဲ့ဖူးသည်။
ရန်ဖြစ်သောအခါ ကိုယ်မည်မျှခံရသည်ဖြစ်စေ ရန်သူမျက်ခွက် ကိုတစ်ချက်လောက် ထိထိမိမိထိုးချလိုက်ရသည့်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ဖွယ်ခံစားမှုကိုနှစ်သက်သည်။ ဂစ်တာသံသက်သက်ဖြင့်ဆိုထားသောကန်းထရီးသီချင်းတစ်ချို့ကိုသဘောကျသည်။
Lust For Life ၀တ္ထုထဲတွင်သူချစ်သောကေးအတွက် ကိုယ့်လက်ဖ၀ါးကိုယ်မီးနှင့်ရှို့ခဲ့သောဗန်ဂိုးကို ကျွန်တော်မအံ့သြပါ။သူအတွက်ခံစားချက်တုို့ပြည့်ကျပ်ကာထွက်ပေါက်မဲ့လာသည့်အခါတိုင်းနံရံကိုလက်သီးနှင့်ထိုးမိသည့်အတွက်ကျွန်တော့်ညာဘက်လက်ခုံပေါ်တွင်ဒဏ်ရာတို့ပြည့်နှက်လျက်ရှိသည်။
သူ့အတွက်တကယ်လိုအပ်လျင် ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှဖြည့်စွမ်းပေးချင်သော်လည်း ကျွန်တော့်ဘ၀ထက်အစစ အရာရာသာလွန်နေပြီးဖြစ်သော သူ့အခြေအနေတွင် ကျွန်တော့်အကူအညီကိုသူဘယ်တော့မှလိုအပ်လာမည်မဟုတ်ပါ။
မပြီးသေးသောပန်းချီကား ဟူသောစကားလုံးကို သီချင်းတစ်ပုဒ်တွင်စကြားဖူးခဲ့တာလားဝတ္ထုတစ်ခုတွင်ဖတ်ဖူးခဲ့တာလားမသေချာတော့သော်လည်းထိုစကားလုံးကိုအလွန်အမင်းနှစ်သက်သည်။
သူနှင့်ကျွန်တော်၏ဇာတ်လမ်းသည်လည်းမပြီးသေးသော သို့မဟုတ် အပြီးမသတ်ရဲသေးသော ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖြစ်သည်။ဖြစ်သင့်သော ဇာတ်သိမ်းကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးတွေ့မြင်နိုင်သော်လည်း ထိုလမ်းကိုမရွေးချယ်ရဲသည်မှာ ကျွန်တော့်၏တွေဝေမှုကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
တစ်ရက်မမြင်ရလျင်မနေနိုင်သောသူ့မျက်နှာကလေးဖြစ်နိုင်သည်။ကြားလိုက်ရုံဖြင့် ရင်ထဲရှိအပူမှန်သမျှမေ့လျော့သွားလောက်အောင်စွမ်းနိုင်သည့်သူ့အသံလေးဖြစ်နိုင်သည်။သူ့ကိုတစ်နေ့မတွေ့ရလျင်မနေနိုင်သူတစ်ယောက် သူမရှိလျင်ဘ၀ကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းသွားရမလဲဆိုတာကို သူနည်းနည်းဖြင့်ကိုယ်ချင်းစာခဲ့ဖို့ကောင်းသည်။
‘ ကို က ဘာလို့မပွင့်လင်းရတာလဲ’ ဟုသူမကြာခဏပြောခဲ့ဖူးသည်။လိုချင်သောအရာတစ်ခုကိုဖွင့်ပြောတောင်းဆိုတတ်သောလူအမျိုးအစားထဲတွင်ကျွန်တော်မပါဝင်ပါ။
ကျွန်တော့်ကိုတစ်စုံတစ်ခုသူလိုက်လျောတော့မည်ဆိုလျင်ထိုလိုက်လျောမှုသည်အားနာသောကြောင့်မဖြစ်စေရ..သနားသောကြောင့်မဖြစ်စေရ။ သူ့ဆန္ဒသက်သက်ဖြင့်နားလည်မှုသာဖြစ်စေချင်သည်။ဖွင့်ပြောမှရနိုင်မည်ဖြစ်သောအခွင့်အရေးကိုဘယ်တုန်းကမှမလိုချင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။တစ်ခါတစ်လေ ရင်ထဲရှိဆန္ဒကိုဖွင့်ပြောတောင်းဆိုချင်သည့်စိတ်နှင့် ဖွင့်မပြောချင်ပဲတင်းတင်းစေ့ထားချင်သောမာနတို့သည်ရင်ထဲတွင်ပူလောင်မွန်းကျပ်စေအောင်ကျွန်တော့်ကိုနှိပ်စက်တတ်သည်။ထိုအခါမေးခွန်းတစ်ခုကိုထပ်တလဲလဲ သူ့ကိုမေးမိသည်။
ထိုမေးခွန်းများစွာကိုကျွန်တော်မပြောဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးချုပ်တည်းခဲ့သည်။မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပဲ စကားလုံးအဖြစ်ထွက်ကျသွားသောအခါများတွင်သူ့တုံ့ပြန်မှုသည်ကျွန်တော် ကိုထိခိုက်နာကျင်စေသောစကားများသာဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်သည် ဘ၀ရှေ့ရေးကို နည်းနည်းမှ မစဉ်းစားတတ်သူဖြစ်သည်။
လောဘနည်းပါးသော စာဖတ်ဝါသနာပါသော အေးဆေးတည်ငြိမ်သော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်သူအဖြစ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့သင့်သည်။
ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသော ကလပ်တက်ရန် ရှိုးပွဲနှင့်အခြားအပျော်အပါးများကိုဝါသနာထုံသော မိတ်ကပ်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်များနှင့်မှန်တင်ခုံကိုစိတ်ဝင်စားသော ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော့်ကိုယ်စား သူရွေးချယ်ခဲ့သင့်သည်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုမှ ဆုံဆည်းကာမခွဲနိုင်မခွာရက်ချစ်မြတ်နိုးစေခဲ့ခြင်းသည် ကံကြမ္မာ၏ရက်စက်သောကျီစယ်မှုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ပြင်မရအောင်ကြီးမားသောအမှားအယွင်းတစ်ခုလဲဖြစ်ပါသည်။
ဒါဆိုနားထောင်စရာသီချင်းကော..အခန်း၏ညာဘက်ထောင့်တွင်အထပ်လိုက်တင်ထားသော ရုပ်ရှင်စီဒီများရှိသည်။တစ်ချို့ကားကြမ်းပြင်တွင်သည်အတိုင်းလဲကျကာပြန့်ကျဲလျက်..စည်းကမ်းရှိပါဟု သူ့ကိုမကြာခဏဆုံးမတတ်သောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခုလိုနေထိုင်တာကိုတွေ့လျင်သူဘယ်လိုမှတ်ချက်ချမှာပါလိမ့်။
ကိုစိတ်ဆင်းရဲတာကိုမမြင်ချင် ဘူးဟု မကြာခဏပြောဖူးသောနူတ်ခမ်းလေးများ ကိုရုတ်ချည်းမြင်ယောင်လာသောအခါယောင်ယမ်း၍မျက်လုံးကိုမှိတ်ပစ်လိုက်ရသည်။သွားစမ်းပါ..။ငါ့ကိုဒီထက်ပိုပြီးမနှိပ်စက်ပါနဲ့။ ဘာနာမည်မှတပ်မထား သောစီဒီတစ်ချပ်ကိုစက်ထဲထည့်လိုက်သောအခါ.. သူကြိုက်၍ကျွန်တော်မုန်းသောသီချင်းတစ်ပုဒ်ထွက်ပေါ်လာသည်။
Enrique Iglesia ၏ ၀မ်းနိုက်စတန်း ဟူသောသီချင်းဖြစ်သည်။
အခွေတစ်ခုခုပဲကြည့်ကာအိပ်ပျော်ဖို့ကြိုးစားတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်ကာ အဆင်သင့်ရှိနေသောအခွေပုံကိုရှာဖွေကြည့်မိသည်။အိပ်မပျော်သူတစ်ယောက်ကိုပို၍စိတ်ချောက်ချားစေနိုင်သော ထိတ်လန့်သည်းဖိုကားမဖြစ်စေရ သူနှင့်ကျွန်တော်၏အဖြစ်အပျက်ကိုတိုက်ဆိုင်သတိရစေနိုင်သော How to deal, View from top
There's something about mary, tora tora, Just like heaven, sliver ဟုတ်သားပဲ။
ကျွန်တော်၏အိပ်မပျော်နိုင်သောရောဂါကိုသူမ ကတော့ကုစားပေးနိုင်လိမ့်မည်။အခွေကိုစက်ထဲထည့်လျက်အကြိမ်ကြိမ်ကြည့်ပြီးသောဇာတ်ဝင်ခန်းများကိုကျော်ပစ်လိုက်ပြီး လိုရာရောက်တော့ရပ်လိုက်သည်။ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်
ရှယ်ရွန်စတုံးသည်သူ့ချစ်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် မှီနွဲ့ကာခပ်တိုးတိုးငိုရှိုက်နေ၏။သူ့ချစ်သူကသူ့ပုခုံးသားကိုဆုပ်ကိုင်လျက် မကြောက်နဲ့ အနားမှာကိုယ်ရှိတယ်လေ ဟုအားပေးနေသည်။ဘ၀ကိုလက်တွဲရင်ဆိုင်ရန်တော့မဟုတ်။
`ဘုရားဘုရား´ ဒီညအိပ်ပျော်နိုင်ပါတော့မလား။ တစ်ဖြည်းဖြည်းပြူတင်းတံခါးမှန်တွင်စုဝေးလာသောရေခိုးရေငွေ့များစုဝေးများပြားလာသောအခါရေစီးကြောင်း အဖြစ်အောက်ခြေသို့စီးဆင်းသွားသည်။ရင်ထဲတွင်ခံစားရသော
တစ်ခါတစ်ရံပေါက်ကွဲအော်ဟစ်ကာနံရံကိုလက်သီးနှင့်ထိုးမိသောဒေါသ တစ်ခါတစ်လေကြေကွဲနာကျင်စွာမျက်ရည်ကျရသော သောကတို့အတွက်ကျွန်တော်လက်ခံရရှိသောအရာသည်အပြစ်တင်ငြူစူသောစကားလုံးတချို့သာဖြစ်တတ်သည်။ပြသနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတိုင်း သူ့ကိုဆုံးရှုံးရမှာပိုကြောက်လာတတ်ခြင်းသည်လည်းကျွန်တော့်၏အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။တကယ်ဆို သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် စွန့်လွှတ်ဖို့စဉ်းစားသင့်သည်မဟုတ်လား..။
ရင်ထဲတွင်တစ်စုံတစ်ခုလိုအပ်သောခံစားချက်သည်ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ အနားတွင်ရှိသောရေပုလင်းကိုကောက်မော့လိုက်သော်လည်း အာခေါင်ထဲတွင်ခြောက်သွေ့နေဆဲဖြစ်သည်။
အနှောင့်အယှက်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားသော တီဗွီကိုအညှိုးတစ်ကြီးပိတ်ပစ်လိုက်သည်။နံရံတွင်ချိတ်ထားသောကျောပိုးအိတ်ထဲတွင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ချို့ရှိသည်။ အခန်းထောင့်တစ်နေရာတွင်ကျွန်တော်ဘယ်တုန်း ကမျှအသုံးမပြုခဲ့သောဖုန်းတစ်လုံးရှိသည်။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ယောက်ကိုလိုအပ်နေတာသေချာသည်။
‘သစ္စာရှိကြေးနော်..’။စကားလုံးများစွာဖြင့်နာကျင်စေခဲ့သော နူတ်ခမ်းတစ်ခုမှထွက်ကျလာသောစကားများဖြစ်သည်။ထိုစဉ်ကတော့ ကျွန်တော်လက်သန်းတစ်ဖက်သည်သူ့လက်သန်းကလေးတစ်ဖက်ကိုချိတ်တွယ်လျက်ရှိခဲ့သည်။သူ့မျက်ဝန်းကလေးတွေကဖွင့်ပြောသောစကားများ စွာကိုယုံကြည်ကျေနပ်စွာဖြင့် ကျွန်တော်အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသောလက်သန်းကလေးတစ်ဖက်ကို ကြည်နူးစွာနမ်းရှိုက်ခဲ့သည်။မေ့ထားချင်သောကျွန်တော့်အတွေးတွေထဲသို့သူဘာလို့ဒီလောက်နေရာယူထားရတာလဲ။ အိပ်ယာဘေးကစားပွဲလေးပေါ်ရှိဓာတ်ပုံထဲရှိချိတ်တွယ်ထားသောလက်နှစ်ဖက်သို့အကြည့်ရောက်သွားသောအခါ နာကျင်သောဝေဒနာ သက်သက်သည်ကျွန်တော့်ရင်ကိုဆုပ်ချေလာသည်။ဓာတ်ပုံထဲရှိတွဲလက်နှစ်ဖက်က တော့ခုချိန်တိုင်ခိုင်မြဲဆဲဖြစ်ပါသည်။ ‘ဘယ်တော့မှမခွဲသွားဘူး..ကတိပေးတယ်’ တဲ့လား။
သူ့ကို ကျွန်တော်ဆိုပြချင်သောသီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်။သို့သော်လည်းဘယ်တော့မှ မဆိုပြဖြစ်မှာသေချာပါသည်။ ‘Eagle’ အဖွဲ့၏ Love will keep us alive ဟူသောသီချင်းဖြစ်သည်။ ‘when we hungry..love will keep us alive' ဟူသောနေရာရောက်လျင်သူကျွန်တော့်ကိုရယ်မောလိမ့်မည်။
စားပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသောဆေးဘူးတစ်ဘူးထဲတွင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ထောက်ခံချက်ဖြင့်ဝယ်ထားသောကျွန်တော့်မေ့လျော့ခြင်းအားကူညီနိုင်မည့်ဆေးပြားတစ်ချို့ရှိသည်။ ရေလည်ကောင်းတယ်ဟေ့ယောင် ဟုအရယ်တစ်ဝက်နှင့်ပြောလာသောထိုဘော်ဒါ၏အသံကိုပြန်သတိရမိသည်။ဘူးအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ..
တစ်ခါတစ်လေတော့ တစ်ပါးသူခေတ္တနားခိုရာ သစ်ကိုင်းကလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်..။ ﻿
Posted by Alex Aung at 10:28 AM No comments:
ကျွန်တော့်နာမည်ရင်း ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင်ထဲမှာပါတဲ့နာမည်ကတော့ ဇာနည်အောင်ပါ။ အမေတို့ကရော သူငယ်ချင်း တွေကရော ဇာနည် လို့ခေါ်လေ့ရှိ ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငယ်ဘ၀ကတော့ရိုးပါတယ် အဆန်းတကြယ် မရှိပါဘူး။ အရမ်းနွေးထွေးတဲ့ မိသားစုလေး တစ်ခုမှာ ပြင်ဦးလွင်ဆေးရုံကြီးရဲ့ မွေးခန်းထဲကနေ မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ အမေက ကျန်းမာရေးဆရာမပါ။အဖေကတော့ ကားမောင်းတယ်၊ ကုန်သည် လုပ်တယ်။ ပညာတတ်လူတန်းစားတော့မဟုတ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ပညာမဲ့လူတန်းစားလည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ အမေအလုပ်လုပ် တဲ့နေရာမှာ အဖေကအထောက်အကူ ပေးနိုင်သလို အဖေ့လုပ်ငန်းမှာလည်း အမေပါ ၀င်နိုင်သူပါ။ မိသားစုမှာ အဖေရယ် အမေရယ် ကျွန်တော်ရယ် ကျွန်တော့်ညီလေးရယ်လေးယောက် ရှိပါတယ်။ အဖေက မိသားစူအပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးလွန်းသူပါ။မှတ်မိသေးတယ် အမေသင်တန်းတက်ဖို့ ရန်ကုန်သွားရမယ် ဆိုတဲ့သတင်းကြားတဲ့ညကလေ အဖေရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေတဲ့ပုံစံကို။ အဖေ့လိုခက်ထန်တဲ့လူ ကငိုတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်ကို ဥခွံထဲမှာထည့်ထားသလိုကို ချစ်နေတတ်တာ။အဖေ့အချစ်ကို မဝေဖန် လိုပေမဲ့ အဲဒီလိုအချစ်ကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ်ဟာ သူများထက်ထိရှလွယ်ပါတယ်၊ အားကိုးချင်စိတ်ကလည်း မသိမသာရှိနေတတ်ပြန်တယ်။ ထားပါတော့လေ....။
အမေ့မိသားစုဘက်က ကုန်သည်မျိုးရိုးပါ။ဆန်ကုန်သည်တွေဆိုပါတော့ စီးပွားရှာရာမှာတော်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ပညာတတ်လူတန်းစား တော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး။ စေတနာတော့ပါတယ် စကားပြောမတတ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေပေါ့။ အမေက စကားအပိုမပြောတတ်သူပါ။ ခံစားစရာ ရှိကြိတ်ခံစားတတ် သူဆိုပါတော့လေ။ သားတွေကိုလွမ်းရင် ထမင်းစားပျက်တယ် ငေးငိုင်နေတတ်တယ်တဲ့ အဖေကပြောပြတယ်။ စာတော့အရမ်း တော်သူပါ သားဖွားဆရာမအတွက် သင်တန်းတက်တုန်းကလည်း မြန်မာတပြည်လုံးပထမတဲ့၊ ကျန်းမာရေး ဆရာမ စာမေးပွဲကြတော့လည်း မြန်မာတပြည်လုံး ပထမပဲ။ အလုပ်ခွင်မှာ သင်တန်းတွေတက်ရတော့လည်း ရှေ့တန်းကပါတယ်။ စကားမစပ် ပြောရရင် အမေနဲ့အဖေက ရန်ကုန်မှာမနေချင်တဲ့ ရန်ကုန်လူနေမှုစနစ်ကို အလွန်သဘောမကျသူတွေပါ။ အမေကျန်းမာရေးဆရာမ သင်တန်းစာမေးပွဲမှာ ပထမရတုန်းက သင်တန်း ကျောင်းမှာ နည်းပြပြန်လုပ်ပါ တိုက်ခန်းကိုယ်ပိုင်ပေးပါ့မယ် ဆိုတာတောင် ငြင်းဆိုပြီး ပြင်ဦးလွင်နဲ့မနီးမဝေးမှာ တာဝန်ကျအောင်ရွေးချယ်ခဲ့သူပါ။ ကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်ပြန်ဘူး ရန်ကုန်မှာနေမယ်ဆိုတာ ငယ်ငယ်က တည်းကပြောနေတဲ့စကားပါ။ ဘာလို့လည်းတော့မသိ ကျွန်တော်ဟာ လွတ်လပ်မှုကိုကြိုက်သူပါ။ အဖေစည်းကမ်းကြီး သလောက် အနည်းငယ်တော့ ဆန့်ကျင်လိုစိတ်ရှိသူပါပဲ။ ဒါမလုပ်ရဘူးပြောရင် ဘာကြောင့်မလုပ်ရတာလည်း စူးစမ်းတတ်သူပေါ့။ နည်းနည်းလေး တော့ စမ်းကြည့်ပြီးမှ ဆက်မလုပ်သူပါ။
မေမြို့မရောက်ခင် အောင်ချမ်းသာရွာလေးမှာ သူငယ်တန်းကနေ ၄တန်းထိတက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ တတိယတန်းတက်နေတုန်း ၈၈အရေးအခင်းဖြစ်လို့ကျောင်းနားခဲ့ရပါသေးတယ်။ ၅တန်းလောက်မှာ အမေရန်ကုန်သင်တန်းသွားတက်တော့ ပြင်စာ အဖေ့ရွာမှာ ၆တန်းအထိတက်ခဲ့ပါတယ်။ ၇တန်းမှာတော့ အမေတာဝန်ကျတဲ့ အမရပူရနယ်ကလေးရဲ့ မြစ်ငယ်မြို့မှာ ၁၀တန်းထိတက်ခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တက် တာကတော့ တောင်သမန်အင်းနားက ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာစာအဓိကနဲ့တက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းမတက်ခင် တနှစ်မှာတော့ မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ ညနေပိုင်းဒီပလိုမာသင်တန်းကို နှစ်နှစ်တက်ခဲ့တယ် တခြားသင်တန်းတွေတက်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းတက်ရင်း ကွန်ပျူတာစင်တာတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်တန်ဖိုးသိလိုတာရော အိမ်မှာကပ်ပြီးနေရမဲ့ဘ၀ ကိုနည်း နည်းညည်းငွေ့တာ ရောကြောင့်ပေါ့။ ရတဲ့လခက မဖြစ်စလောက်ပါ ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တော့ လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာ အဆင်ပြေပြေ ဆက်ဆံလာတတ်ခဲ့တာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျောင်းပြီးခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းပြီးတော့လည်း အလုပ်ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ် မန္တလေးမှာအဆောင် နေရင်းနဲ့ပေါ့လေ။
ဘာသာရေး ယုံကြည်ချက်ကိုပြောရရင် အဖေအမေက ဗုဒ္ဓဘာသာမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်။ အဒေါ် အပျိုကြီးတွေ နတ်တင်ရင်လည်း လိုက်သွား၊ ဘုရားပွဲဆိုလည်းပျော်ပျော်ပေါ့။ သူတို့တွေရဲ့ ယုံတမ်းနတ်သမိုင်းတွေကိုလည်း တကယ် ကြီးထင်တတ်ခဲ့တယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်မတက်ခင် ဆယ်တန်းဖြေပြီးစမှာပဲ ဘာသာရေးကိုလေ့လာဖြစ်တယ်၊ တရား စခန်းတွေဝင်ဖြစ်တယ်၊ နောက်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ရင်ထဲအသည်းထဲကယုံကြည်တဲ့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ 'ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်' နော်အစ်ကို ကျွန်တော်ကလေ။ ကျွန်တော့်ဘ၀ကသာမန်ပါပဲနော်။
ကျွန်တော့်လိင်စိတ်သဘာဝကိုလည်းပြောပြပါဦးမယ်။ ကျွန်တော်က အိမ်မှာ သီးသန့်နေထိုင်တတ် သူပါ။ စကားပြောနူးညံ့သတဲ့။(အရင်ကပေါ့လေ။) စာအုပ်တွေနဲ့ပျော်မွေ့တတ်သူပါ။ ငယ်ငယ်ကအမေအလှပြင်တဲ့နားထိုင်ကြည့်ရင်း အလှအပကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အမေကလည်း ညီကိုမွေးဖို့ အဝေးကြီးဆိုတော့ တစ်ဥိးတည်းသောသားလိုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော့်ကို အလွန်ချစ် အလိုလိုက်သူပါ။ အဖော် သိပ်မထားပဲအလုပ်ကျိုးစားသူဖြစ်တဲ့အတွက် သူလိမ်းသမျှ ကျွန်တော့်မျက်နှာပေါ်တင်ပေးတတ် တယ်။ ထားပါလေ......ဒါပေမဲ့ မိန်းမဖြစ်ချင်စိတ်တော့ ၀င်မသွားပါဘူး။ အလှအပမျက်စိရှိသွားတယ်ဆိုပါတော့။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်ခါစမှာ မန္တလေးက ဦးလေးမန်နေဂျာလုပ်တဲ့ ဟိုတယ်ကိုနွေရာသီကျောင်းပိတ် ရက် သွားလည်ချိန်မှာ တော့ လိင်ကိစ္စတွေကို သိကြားလာခဲ့ပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက မိန်းကလေးတွေအပေါ် ရင်မခုန်တတ်တာကိုပဲ။ အဲဒီမှာပဲ လိင်တူဆက်ဆံ တဲ့အတွေ့အကြုံကို လူပျိုဖော်တောင်မ၀င်သေးတဲ့ ကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အရွယ်မတိမ်းမယိမ်း ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းချောချော တစ်ယောက် နဲ့ပေါ့။ အခန်းထဲမှာ ညအိမ်ရင် ကျွန်တော်က လွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ကျင့်ရှိပါတယ်။ တညမှာတော့...
အခန်းထဲမှာတစ်ယောက်တည်း အိပ်တဲ့အခါလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ခြင်းအကျိုးကတော့ စိတ်လွတ်လပ်တယ် ပေါ်ချင်ရာပေါ်ကြည့်မယ့် လူမရှိဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့အခုတော့ ကိုယ့်အိမ်မှမဟုတ်ဘဲ....ညတစ်ဝက်လောက်အရောက်မှာ တခုခုနာကျင်တဲ့ခံစားမှုကြောင့် နိုးထလာခဲ့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်အိပ်နေတာ ကိုနှောင့်ယှက်နေသူတစ်ဦးကြောင့်ပေါ့။ ထူးဆန်းတာက အဲဒီအပြုအမူဟာ ကိုယ့်ကိုစော်ကားတဲ့အပြု အမူ ဒေါသဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော် ဒေါသလည်းမထွက် စူးစမ်းချင်စိတ်သာပေါ်နေတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် အံ့သြမိသလားမမှတ်မိပါဘူး။ တခြားလူဆိုရင် ထထိုးမယ့်အပေါက် ပါသူ့လုပ်ဆောင်ချက်က။ " မင်းငါ့ကိုဒီလိုလုပ်တာ ဖီးလ်ရှိလို့လား၊ မိန်းကလေးတွေကိုပဲလုပ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလား။" "ရှိတာပေါ့ကွာ....မင်းအိပ်နေတာ တော်တော် စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်း တယ်... ဒါကြောင့်" စတဲ့စကားတွေကသူနဲ့ပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့စကားပါ။ ပြီးဆုံးသွားတဲ့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်အပြန်မှာ ကျောင်းဆက်တက်တယ် ။ တစ်လနှစ်လလောက်ကြာတော့ ဟိုတယ်ကအတွေ့ကိုရင်ခုန်တမ်းတရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူပျိုဖော်ဝင်မှန်းမသိဝင်ခဲ့ပါတယ်။
နယ်မှာနေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် ပါတနာရဖို့လွယ်မယ်မထင်ပါဘူး။ကျွန်တော့်အနေနဲ့လည်းလုံးဝမရှာတတ်မရှာဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ တက္ကသိုလ်တက်တော့ လည်း သူငယ်ချင်းများနဲ့သာအပျော်နေဖြစ်တယ်။ တချိန်ကအဖြစ်အပျက်ဟာ အိမ်မက်လိုပါပဲ။ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းများနဲ့အပျော်နေတယ်.... ရည်းစားမကျဘာမကျပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာ ဖီးလ်က သိပ်မနှစ်သက်သလိုပဲ သူတို့ကိုယ်နံ့ အမူအကျင့်စသဖြင့်ပေါ့။ အင်းယောက်ျားပီသတဲ့ အကျင့်စရိုက်ရှိသူ စိတ်ဓာတ်ပြည့်သူသူငယ်ချင်းကို မသိမသာသဘောကျ နေဖြစ်ပါရဲ့ လေ။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ ညနေပိုင်းသင်တန်းတက်ဖြစ်တော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ချို့နဲ့သာအတူသွားလာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အားကစားကလပ်မှာ ကိုယ်ကာယအလှအတွက်လေ့ကျင့်ကစားဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့။ ပျော်ပါးသွားလာ ၀တ်စားနိုင်သူအများစုပါဝင်တဲ့ ပိန်ပိန်သွယ် သွယ်ကျောင်းသားတွေထဲမှာ ကိုယ်ခန္ဓာကောက်ကြောင်းထူးခြားနေတဲ့အဖြစ်ကြောင့် သူ့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ဖြစ်စေပါသတဲ့။ စကား ပြောချိုသာတယ် ဒေါသထွက်တာသိပ်မတွေ့ရဘူး စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးငြိမ်နေတတ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာ သူ့အတွက် ပိုမိုသဘောကျစရာဖြစ်ခဲ့ ပါသတဲ့။ သူဆိုတာက ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ သင်တန်းအပတ်စဉ်တူ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ကျွန်တော့်အတွက် ပါတနာဆိုတာကို သိဖို့သင်ပေးသူ ခပ်ထွားထွားလူငယ်တစ်ယောက်ပေါ့။ ကျောက်မဲကလာသတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့လာသလေ။ ထားပါတော့.....ညနေပိုင်း တစ်ခါတလေ အချိန်စောဆင်းလို့ သူများတွေလို ကန်တင်းမသွားချင်လို့ ကျောင်းရှေ့တမာပင်တန်းမှာပဲထိုင်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေဆိုသူက ဘယ်မှမသွားဘဲ ကျွန်တော်နဲ့စကားလက်ဆုံကျတယ်၊ စာအုပ်တွေလက်ဆောင်တဲ့ဝယ်လာပေးတယ်၊ မုန့်ထုပ်တွေက မပါမဖြစ်ပေါ့လေ။ ကြာလာတော့ သံယောဇဉ်ဖြစ်လာ တယ်ထင်ပါရဲ့။ ဒီလိုနဲ့ မိုးသည်းလို့ သူ့ကားနဲ့အစောင်ပြန်ဖြစ်တဲ့ည က.......သူ့အိမ်လိုက်ပါသွားဖြစ် တယ်။ သူ့အ၀တ်အစားချောင်ချောင်ချိချိတွေနဲ့ အိပ်မောကျခဲ့တယ်။ အဲဒီ့ညမှာပဲ လှုပ်ရှားမှုအရှိန်အဟုတ်ပြင်းတဲ့ ရင်ခုန်မှုတွေကို သူသင် ပေးခဲ့ပါတယ်။ တတွဲတွဲနဲ့ အမြဲတွေ့ရတယ် ကျောင်ြး့ပီးလို့ လတ်မှတ်ပေးတဲ့အခမ်းအနားမှာတောင် ဓာတ်ပုံတွေနေရာအနှံ့ရိုက် ဖြစ်ခဲ့ကြ တာ တခြားသူငယ်ချင်းတွေက စတဲ့အထိပါပဲ။ အချိန်တန်အိမ်ပြန် ပျော်ရာမနေ တော်ရာမနေစကားပုံတွေကိုနားလည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလငယ် လေးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ...အခုချိန်တော့ အမှတ်တရတစ်ခုအဖြစ်သာပါ။
ကျွန်တော့် ၀ါသနာလေးတွေကိုလည်းပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အမေက ညီ့ကိုမွေးဖို့ကာလရှည်တားထားတာ ဆိုတော့ ကျွန်တော်ဟာ တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာရှည်စွာပေါ့။ ဒီတော့ အမေ၀ယ်ဝယ်လာပေးတဲ့ ရွှေသွေး၊တေဇ၊မိုးသောက်ပန်း၊ အဖေ၀ယ်လာပေးတဲ့ ပုံပြင်စာအုပ်လေး တွေက စာဖတ်ဝါသနာပါဖို့ဖန်လာသောအရာလေးတွေပါ။အဖေ့အဒေါ် ဘွားလေးဖြစ်မှာ ပေါ့လေ...ပြင်စာအိမ်ကိုသွားလည်တဲ့ညမှာဆိုရင် ခေါင်းကို သန်းဥမရှိလည်း စမ်းစမ်းပေးရင်း ရိုးရာပုံပြင်တွေပြောပြတာနားထောင် ရင်းဖြတ်သန်းဖြစ်ခဲ့တာလွမ်းစရာပါ။ မေမြို့အဘွားအိမ်ရောက်တော့ 'ကော်ဖီဆိုရင် ခါးခါးသောက်တတ်တယ်'ဆိုတဲ့ ချစ်ကောင်းသီချင်း တွေ 'နင်းဂျား..နင်းဂျား'ဆိုတဲ့ ကော်နီသီချင်းတွေကို ဖွင့်တတ်တဲ့ တီဗီကို အလွန်သဘောကျဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက တီဗီက လာတဲ့ ဇာတ်မင်းသားတွေကတဲ့အက မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်သီချင်းထဲကအကတွေကို ကြည့်ပြီး ထထကပြတာ ရယ်စရာတော့အကောင်း သားထင်ပါရဲ့။ အက၀ါသနာပါသူပါပဲ။အခုချိန်မှာရောဆိုရင်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုပေးတဲ့ သရဲကားတွေ၊ လူသတ်ကားတွေ၊ အဆန်း တကြယ်ကားတွေကြိုက်နေပါပြီ။ မြန်မြန်ဖတ်မြန်မြန်ပြီး စာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်နေပေမဲ့ တကယ်တမ်းအချိန်ယူဖတ်မယ်ဆိုရင် ဟဲမင်းဝေးရဲ့ 'ပင်လယ်ပြာနဲ့ တံငါအို'လိုစာအုပ်မျိုးကိုလည်းဖတ်တတ်သူပါ။မြန်မာပြည်မှာအကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာကတော့ ဆရာမ'ဂျူး'ပါ။
အခုချိန်မှာတော့ အွန်လိုင်းသုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ဘလော့ခ်တွေရေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာကိုယ်ပိုင်ဘလော့်ခ်နှစ်ခု ရှိတယ်။ တစ်ခုကတော့ ကဗျာတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ တခြားသာမန်ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးတွေရေးတင်လေ့ရှိပြီး၊နောက်တစ်ခုကတော့ Homosexuals Erotic ၀တ္ထုတွေကို ဘာသာပြန်ပြီးတင် ရေးပြီးတင်တဲ့လိင်ကိစ္စ ဘလော့်ခ်ကတစ်ခုပေါ့။ အချိန်ရရင်အွန်လိုင်းပေါ်တက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောရတာလည်း အထီးကျန်ခံစားမှုကိုမေ့ပျောက်ဖို့အကောင်းဆုံးပေါ့။ အင်္ဂလိပ်သီချင်းချိုချိုလေးတွေ မြူးမြူးလေးတွေကိုလည်း နားထောင်လေ့ရှိသူပါ။ လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြော သူတို့ပြောတာကိုနားထောင်ရတာကိုလည်း ၀ါသနာပါသူပါပဲ။ ကျွန်တော့်ဝါသနာက "Learn about human beings and their mind"
.ချစ်ရေးချစ်ရာကိစ္စတွေကိုလည်းအစ်ကိုသိချင်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်ခံယူချက်ကတော့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ဖို့ဆိုတာ အထင်ကြီးအားကိုး စိတ်ဖြစ်ပေါ်မယ်၊ သူ့ခံစားချက်ကိုကိုယ့်ခံစားချက်ကို နားလည်မှုရှိမယ်၊နောက်ပြီး ကိုယ့်အတ္တကိုလျော့ပြီးသူ့အတွက် လိုက်လျောနိုင်ရမယ် စသဖြင့်ပေါ့လေ အဲဒီအချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး အချစ်ဆိုတာကိုလက်ခံတယ် ပြန်ချစ်ပါတယ်။ ချစ်သူ ရင်ထဲက အမှန်တကယ် ရင်ခုန်ပြီးချစ်ခဲ့တဲ့ချစ်သူ ဘ၀မှာ(၃)ယောက် ရှိခဲ့ပါပြီ။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော့်ဘက်က ဘယ်တုန်းကမှရယူခဲ့တာ မရှိခဲ့ဖူးဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့လမ်းခွဲတယ်ဆိုရင်တောင် ဘယ်တုန်းကမှ အမုန်းနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တာမရှိဘူး။အခုထိ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ဆက်ဆံလို့ ရတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေနဲ့ ဆက်ဆံပြီးလမ်းခွဲခဲ့တာပါ။ ဒါမထူးဆန်းဘူးလို့ထင်လား လမ်းခွဲတယ်ဆိုကတည်းက မုန်းလို့ဆိုတာ ကျွန်တော့် အတွက်မမှန်ပါဘူး။ အချိန်ကြာလာတော့ ကိုယ့်အပေါ်သူတို့ဖီလင် နောက်ပြီး သူတို့တွေရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အမြင်၊ခံစားမှု၊အချစ်အပေါ် သဘောထား ရှေ့ရေးအပေါ်စသဖြင့်အမြင်မတူတော့သလို လိင်ကိစ္စမှာသူတို့က အသစ်အသစ်အမြဲလို နေတဲ့ တခြားဟိုမိုတွေလိုဖြစ်လာ တော့ ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တော့ဘဲ အဆင်ပြေမယ့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။
(၁) သူနဲ့ကျွန်တော် မန္တလေးမှာနေပြီး ကွန်ပျူတာစင်တာမှာအလုပ်လုပ်နေရင်း အွန်လိုင်းသုံးဖြစ်တော့ မိတ်ဖွဲ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကနေ ခင်မင်ခဲ့ရာက စာတွေစာတိုက်ကနေ အပြန်အလှန်ထည့် ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတော့။ခင်တာကြာလာတော့ မတွေ့ရမနေနိုင်ဖြစ်လာရော မိသားစုမပါဘဲ ခရီးမထွက်ဖူးတဲ့ ကျွန်တော်က သူနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ကို ရန်ကုန်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။
- သူဟာ စကားပြောအလွန်ညက်သူပါ၊ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ချို့ယွင်းချက်မရှိပါဘူး၊စကားပြောဖူးတဲ့သူတိုင်းသူ့ကိုနှစ်လို ခင်မင်သွား ကြတာကြီးပါပဲ။အသွင်အပြင်ကလည်းစတားပါပဲ။
- ကျွန်တော်နဲ့မတူတဲ့အချက်က သူဟာပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်သူပါ။ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းသလို အရာရာမှာ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားချင်သူပါ။ တက်ကြွလှုပ်ရှားလွန်းသူဆိုပါတော့။
- ချစ်ရေးချစ်ရာကိစ္စမှာတော့ အလွန်အတ္တကြီးသူပါပဲ။ သူ့ကိုအရာရာလိုက်လျောနိုင်မှအဆင်ပြေပါတယ်။သူသွားချင်ရင် သူလုပ်ချင်ရင် သူ့စိတ်အတိုင်းလိုက်လုပ်ပေးမှ အဆင်ပြေပါတယ်။
- ကျွန်တော်နဲ့တွဲနေတုန်းလည်း တခြားလူတွေနဲ့ ဆက်ဆံမှုမပြတ်ပါဘူး။ သူ့နဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ချင်တော့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ကြစို့ ဆိုပြီး လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ အခုထိလည်းသူငယ်ချင်းဖြစ်တုန်းပါ။
(၂) သူဟာ ပြင်သစ်ပိုင်ရေနံကုမ္ပဏီရဲ့ ကမ်းရိုးတန်းလုပ်ငန်းခွင်မှာ ပညာရှင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေသူပါ။ အသက်က ၃၅၀န်းကျင်ပါ။ အရပ် ၆ပေကျော်တယ်၊ ရုပ်ရည်ကတော်တော်သန့်သူပါပဲ။ ကျွန်တော် ပထမတစ်ယောက်အတွက်ခံစားနေရချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့် ခင်မင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေး ညီလေးတစ်ယောက်လိုဆုံးမတဲ့အပြင် အလွန်ဂရုစိုက်ခဲ့သူမို့ ပထမတစ်ယောက်ကို စိတ်ထဲမှာ မှေးမှိန်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ - သူဟာ ပညာအရည်အချင်း၊အလုပ်အကိုင်၊ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အပြစ်ပြောစရာကိုမရှိပါဘူး။ သူနဲ့ဒိတ်ဖူးသူတိုင်းကလည်း နွေးထွေး ပြူငြာမှုကြောင့်ကြေနပ်ကြတာကြီးပါပဲ။
- အသက်အရွယ်ကွာဟမှုကြောင့် အချစ်အပေါ်ခံယူချက်ထားပုံချင်း လှုပ်ရှားတက်ကြွပုံခြင်းမတူပါဘူးလေ။ ကျွန်တော်က ဂရုစိုက်မှု အချစ်ခံရမှုကို သည်းသည်းလှုပ်တတ်ပေမဲ့ သူကလက်တွေ့ကျကျချစ်တတ်သူပါ။
- အချစ်ကိစ္စမှာသူဟာ သစ္စာရှိလွန်းသူပါ။အချိန်ကြာလာမှ သူ့မှာချစ်ဦးသူရှိတယ်ဆိုတာရော၊အဲဒီချစ်ဦးသူကိုသာ ချစ်သူ အဖြစ်အမြဲတစေ သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာရော၊ကျွန်တော်နဲ့တော့ လမ်းခွဲလည်းကွဲနိုင်တဲ့သဘောတွေသိလာရတယ်။ သူ့ချစ်ဦးသူက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေသမို့လေ ကျွန်တော်နဲ့တွဲတာ။ သူ့ချစ်ဦးသူက သူ့ကို အဖေလိုရော၊ အစ်ကိုလိုရော၊လင်လိုရော ချစ်သူပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒါမလုပ်နဲ့ဆိုရင် ဘာကြောင့်မလုပ်ရတာလည်းလို့ အတွန့်နည်းနည်းတက်တတ်သူပါ။
- သူ့ချစ်သူပြန်လာတော့ သူဟာနှစ်ယောက်လုံးနဲ့မခွဲချင်ဘူး၊ပြဿနာမဖြစ်တဲ့တွေ့နည်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော့်ကိုတွေ့မယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်ဟာ သူ့အပေါ် သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုပြီးမခွဲနိုင်ကြောင်းပြောဖူးတဲ့အထိသည်းသည်းလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ချစ်သူကိုရင်ထဲ ကထုတ် ကျွန်တော်သာရှိချင်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်လူက မိဦးဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ကြာလာရင် သူ့အနေနဲ့အတ္တကြီးရာ ရောက်မယ် ကျွန်တော်လည်း စိတ်ဆင်းရဲမယ် ဒါကြောင့်မတွေ့ကြပါဆို့နဲ့ဆိုပြီး လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ အလိုကြီးမိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ဗျာ။
(၃) သူဟာ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာအရေးပါအရာရောက်သူပါ။ ကျွန်တော့်ထက်အသက်တစ်နှစ်ကြီးသူပါ။ အလုပ် အလွန်ကြိုးစားသူလွန်းသူပါပဲ။ တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ ရုပ်ရည်ကပြောစရာမရှိပေမဲ့သူဟာ အနည်းငယ်ဝသူပေါ့။ အလုပ်မှာ စိတ် ရှုပ်စရာရှိတိုင်း အစားအစာနဲ့ဖြေဖျောက်သူမို့ပါ။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ခင်တာပါပဲ။ နယ်ကလာတာချင်းအတူတူ စကားပြောကောင်း အလုပ်ကြိုးစားသူ နှစ်လိုဖွယ်ဆက်ဆံရေးတွေကြောင့် အသဲကွဲနေတာ သက်သာသွားပြန်ပါရော။
- သူဟာ ပညာအရည်အချင်းတော်တယ်၊အလုပ်အရမ်းကြိုးစားသူ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကတော့ အလုပ်ကလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်နဲ့ ပြင်ပက သူငယ်ချင်းတချို့ကိုသာအလေးထားတတ်ပါတယ်။
- သူ့ခံစားချက်အစစ်အမှန်ကို ကာလအတော်ကြာမှ သိရပါတယ်လေ။ သူ့အချစ်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းကသေဆုံးသွားပါပြီ။ ပြန်လည် မွေးဖွားလာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့လေ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ မရတော့ဘူးဆိုမှ သူ့ကိုမခွဲနိုင်တဲ့စိတ်ဟာ အမြစ်တွယ်နေပါပြီ။
- သူဟာ အလုပ်ကိုကြိုးစားမယ်၊မိသားစုကိုကောင်းကောင်းထောက်ပံ့မယ် တစ်ယောက်ယောက်ကိုလိုအပ်ချိန်မှာ အဆင်ပြေ သူနဲ့တွေ့မယ်။ ဘ၀ကိုရိုးရိုးသားသားသာ နေထိုင်တတ် နေထိုင်သွားလိုသူပါ။စိတ်ရှုတ်ထွေးတာကိုမလိုချင်သူပါပဲ။ ကျွန်တော်က မီးခဲ ဖြစ်နေချိန်မှာ သူဟာရေခဲဖြစ်နေလွန်းတတ်သူပါ။
- သူ့အတွက်ကိုယ်ဟာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေမလား၊ သူ့ဘ၀လေးအေးဆေးစွာပျော်ရွင်ပါစေ၊သူ့လိင်စိတ်ဆန္ဒအတွက် ဖြည့် ဆည်းပေးနိုင်သူကို စိတ်ကြိုက်ရှာနိုင်ပါစေပေါ့။ ကျွန်တော်သူနဲ့ တွေ့ဖို့မကြိုးစားတော့ပါဘူး။ အမှန်တကယ်တန်းတော့ သူ့ကို မခွဲနိုင်ပါဘူး။ သူ့မျက်နှာမြင်ရုံနဲ့ကျေနပ်တတ်တာ ကြားတဲ့သူယုံမယ်မထင်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ဘ၀တစ်ခုမှာသူတို့နဲ့ ဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်လာရသလို၊ အချစ်ဆိုတာဘာလည်း သိလာပါတယ်။ ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက် အချစ်မှာ လဲကျမနေတတ်တော့တာလည်းအမှန်ပါပဲ။ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် အနည်းငယ်ရင့်ကျက်သွားပြီဆိုပါ တော့။ လိင်တူတွေရဲ့အချစ်ကိစ္စမှာ လိင်ကွဲကိုချစ်ရတာနဲ့ မတူတာတော့အမှန်ပါဘဲ။ အချစ်အပေါ်သဘောထားပုံမတူဘူးမဟုတ်လား။
အလုပ်အကိုင်ကတော့ ကွန်ပျူတာစင်တာမှာ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တယ်၊အခု ဆေးကုမ္ပဏီမှာ ကွန်ပျူတာအော်ပရေတာ၊နောက် အန်ဂျီအိုတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တော့မယ်။ ဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်သည်ဖြစ်ပါစေ ကိုယ့်အတွက် အလုပ်အကိုင်တစ်ခုသာမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ကို တိုးတက်ဖို့ဘာတွေလုပ် ပေးနိုင်သလည်း ရှေ့မှာကိုယ့်အတွက်ဘာတိုးတက်လမ်းတွေရှိနိုင်မလည်းစဉ်းစားပြီးမှ အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင် ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်ကိုအမြဲ စူးစမ်းနေတတ် တာကျွန်တော့်အကျင့်ထင်ပါရဲ့။
ဘ၀နေထိုင်မှုအနေနဲ့ကတော့ ဘယ်လိုပြောရမလည်း တိုးတက်မှုလည်းအလွန်လိုချင်သူပါ။ပြီးတော့ စိတ်ရဲ့အလိုကိုလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလိုလိုက်တတ်သူပါပဲ။ငယ်ငယ်က စကားပြောတာ သိပ်မတတ်ပါဘူး ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့စကားအတိုင်းပြောတတ်ခဲ့တယ်။ ဘုဂလန့် ဂွစာ ဖြစ်ခဲ့သပေါ့လေ။အခုများတော့ သူတို့ပြောစကားကိုနားထောင်ပြီး သူတို့စိတ်ကိုသိအောင်တောင် စကားနှိုက်တတ်နေပါပြီ။ သူများ တွေ နိုင်ငံခြားသွား အလုပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားဖူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ မိသားစုက သူတို့ရင်ခွင်ရိပ်ကနေခွဲဖို့လုံးဝသဘောမတူပါဘူး။ မြင့်မြင့်ပဲလေ အနောက်နိုင်ငံသွားမယ်ဆိုရင်တော့ စဥင်္းစားမတဲ့။တိုးတက်လမ်းရှိတဲ့ဆီကိုပေါ့နော်။ အဖေတို့က ရန်ကုန်မြေနဲ့ ရန်ကုအကျင့်စရိုက်ကို မကြိုက်ပေမဲ့ ကျွန်တောကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘာလို့မှန်းမသိဘူး ရန်ကုန်သွားမယ် ရန်ကုန်မှာနေမယ်။ အမေရိကန်သွားမယ် အဲဒီမှာနေမယ်တဲ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက နှုတ်ဖျားမချဘူး။ ဒါဟာ နိုင်ငံကိုအထင်ကြီးတာတော့မဟုတ်ဘူး လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ရတာ ကိုသဘောကျသူဖြစ်နေတာပါ။ အဖေက စည်းကမ်းအရမ်းကျပ်တော့ မသိစိတ်က လွတ်လပ်မှုကို ပိုလိုလားတယ်ထင်ပါရဲ့။
စိတ်ဓာတ်ရေးရာကတော့ ဆယ်ကျော်သက်ဘ၀တွေတုန်းက လုံးဝအဖြူထည်ပါ။ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံး အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်စိတ်နဲ့သာနှိုင်းတတ်ခဲ့ပါတယ်။သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေက ဟင်လို့အကြည့်ခံရရင်တောင် ခံစားတတ်လွန်းသူပါပဲ။ စိတ်ပျော့သလိုလိုနဲ့ပေါ့လေ။ မဟုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ ခေါင်းမာတတ်ပြန်ရော လိုချင်တာဖြစ်ချင်တာကို ဘယ် လောက်တားတားနည်းနည်းလေးတော့ လုပ်ရမှကျေနပ်သူပေါ့။ ဘေးမဖြစ်မဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကို တားနေရင်လည်းမကြိုက်ခဲ့သူပါ။ အခုတော့ အရွယ်ရလာသလို စိတ်ဓာတ်လေးလည်းထား တတ်သွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေ ငယ်စိတ်ကမပျောက်ချင်သေးပါဘူး။
၀ါသနာကတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ သီချင်းနားထောင်တာ မီဒီယာတစ်ခုခုနဲ့ထိတွေ့နေမှ နေပျော်သူပါ။ ဘ၀ကိုအရှုံးမပေးတဲ့ဇာတ်ကား၊ မိသားစု ဆရာသမားသံယောဇဉ်ဘွဲ့၊ နောက်ြ့ပီးရင်ထဲတသိမ့်သိမ့်ကြောက်လန့်လောက်အောင်ရိုက်ချက်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးတွေ စွဲစွဲလန်းလန်းထိုင်ကြည့် တတ်သူပါ။ ငြိမ်ငြောင်းတဲ့သံစဉ်လေးတွေနားထောင်ရင် စိတ်လှုပ်ရှားတတ်ပြန်ပါရဲ့။ မြူးကြွရင်လည်း အခန်း ထဲမှာ ဘယ်သူမှမရှိရင် ဒိုးဒိုးဒန့် ထလုပ်တတ်သူပါ။ ပြီးတော့ ကလေးတွေကိုချစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေမတရားခံနေရရင် မကြိုက် ပါဘူး။ လမ်းဘေးလူငယ်တွေကို မြင်ပြီးနှမြော နေတတ်သူပါ။
မျှော်လင့်ချက်ကတော့ ဘ၀မှာအေးအေးချမ်းချမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံနေသွားချင်တယ် တစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့။ မိသားစုတွေအပေါ်လည်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ချင်ပြန်တယ်။ ကိုယ့်ကိုတကယ်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ ကိုယ်ကလည်းနားလည်ပေးမယ့် ချစ်သူမျိုးရချင်ပြန်တယ်။ အချစ်သာရှိရင် လိင်ကိစ္စက ဒုတိယပါ။
ပြည့်စုံတဲ့လူနေမှုစနစ်ရှိပြီးသားနိုင်ငံတစ်ခုမှာနေထိုင်သွားချင်သလို ကိုယ့်အမိနိုင်ငံကိုလည်း ချစ်တတ်ပါတယ်။
ကဲပါလေ....ကျွန်တော့်ဘ၀ထဲက အကောင်းမွန်ဆုံးတွေရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး စိတ်ရင်းအမှန်တွေကိုချပြခြင်းပါ။ စိတ်တိုအလို မကျတဲ့ အခါမှာ တစ်ခါတစ်လေတော့ ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒေါသအရမ်းဖြစ်ရင် အားငယ်ရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာအုပ် ထဲချရေးပြီး စိတ်ညစ်တာကိုဖြေဖျောက်တတ်ပြန်ရော။ ဒါပေမဲ့လေ ဘယ်လောက်ဒေါသဖြစ်ဖြစ် တစ်ဘက်သားနာကျင်သွားအောင်တော့ ဘယ်တုန်းကမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ လုံးဝမုန်းသွားရင် မျက်နှာချင်းမဆိုင်တော့တာကလွဲလို့ပေါ့။
ဗုဒ္ဓအလိုကျနေထိုင်မယ် .....ချစ်တဲ့သူနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားမယ် လောကကြီးကို အကျိုးမပြုနိုင်ရင်တောင် အကျိုးယုတ်အောင်မလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေထိုင်သွားမယ်။ကျွန်တော့်အကြောင်းတွေက သာမန်ပါပဲ...အစ်ကိုသိအောင်ရေးတတ်သလောက်ရေးပြလိုက်တာပါ။ ဖတ်ပြီး ကျွန်တော့်အကြောင်းတွေ ထပ်သိချင်တယ်ဆိုရင် အစ်ကိုနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျွန်တော့်ကို စမ်းသပ်လေ့လာနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဇာနည် @ Alex Aung (26 Oct 2010)
Posted by Alex Aung at 8:28 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 7:12 AM No comments:
အမျိုးသား လိင်မှုဘ၀ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အကြီးမားဆုံး...